Goolhaye Buffon oo beeniyay inuu aflagaadeeyay Mehdi Benatia kadib guul daradii Napoli – Gool FM
Liibaan Fantastic April 24, 2018
(Torino) 24 Abriil 2018 Goolhayaha kooxda Juventus ee Buffon ayaa beeniyay inuu aflagaadeeyay daafaca ay isku kooxda yihiin ee Mehdi Benatia.
Saxaafada dalka talyaaniga ayaa soo wariyay in Buffon uu qolka labiska ku dhex canaantay Mehdi Benatia isla markaana uu ku yiri hadalo aan wanaagsanayn kadib goolkii looga adkaaday Juventus.
Buffon ayaa ku tilmaamay wararkaas kuwo loogu talo galay in lagu kala qaybiyo kooxda isla markaana daganaan la’aan looga dhex abuuro qolka labiska ee Juventus.
“Warbixinada nuucaas ah waa kuwo si wayn loo abuuro, waxay isku dayayaan inay qal qal ka dhex abuuraan kooxda, hadafka laga leeyahay waa in qilaaf laga dhex abuuro ciyaartoyda, arinkaas si joogto ah ayuu u dhacayay tan iyo markii aan imid kooxda” ayuu yiri goolhaye Buffon.
“Wali ma dhicin 17-kii sano ee aan joogay halkaan inaan laacib farta ku fiiqo oo aan dusha u saariyo masuuliyada guul daro soo gaartay kooxda, inta aan hogaamiye u sii ahay kooxdaana arinkaas waa wax aan dhacayn”.
“Mehdi Benatia waa nin ixtiraam mudan oo wax bartay, waan raali galinayaa laakiin waajib ayaa iga saaran inaan ilaaliyo ciyaartoyda jooga kooxda, Mehdi waa shaqsi aad u fiican”.
Zidane oo amarkaan siiyay ciyaartoydiisa qadka dhexe ka hor kulanka Bayern Munich
Mourinho Oo Qarka U Saaran In Uu Ka Dul Qaado Dhigiisa Guardiola Saxiixa Xidiga Reer Brazil